Amabhaso kaJames Dyson abuyile, iiprojekthi ezintsha ezinomvuzo omkhulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amabhaso kaJames Dyson abuyile, iiprojekthi ezintsha ezinomvuzo omkhulu
Isiseko sikaJames Dyson sizinikele ekuxhobiseni abantu abatsha ukucinga ngokwahlukileyo, ukwenza iimpazamo, ukuyila kunye nokuqonda amandla abo kubunjineli. Njengonyaka ngamnye, esi siseko sinika abayili abancinci kunye neenjineli ithuba lokuqhuba kunye nokwenza urhwebo ngeemveliso zabo, ngeMbasa kaJames Dyson.
Ibhaso likaJames Dyson lifuna ukwamkela italente yabayili abancinci. Uyilo ngalunye luxatyisiwe ngokwexabiso lalo, endaweni yemvelaphi okanye yoyilo. Ukuba uyile okanye ubuyilo okanye ubunjineli kwaye uneprojekthi ebonelela ngezisombululo, eli lithuba elihle lokuthatha inxaxheba. Lo msitho uqulethwe ngamacandelo ama-3 amabhaso: Abaphumeleleyo kuZwelonke, abaGqwesileyo baMazwe ngaMazwe kunye nabaPhumeleleyo bamanye amazwe Le yokugqibela ifumana ibhaso le-33000 ye-euro yoyilo kunye ne-5000 ye-euro yeyunivesithi ofundele kuyo.
1 Yintoni efanele ukuba neprojekthi elungileyo?
2 Ophumeleleyo kwilizwe jikelele ngo-2017
Yintoni efanele ukuba neprojekthi elungileyo?
Uyilo kufuneka lusebenze. Iiprojekthi kufuneka zibe nenjongo ebonakalayo kunye nesibonelelo sokwenyani kumsebenzisi wokugqibela. Uluvo olusisiseko kukuba luyilelwe kunye neyakho nokuzinza.
Ophumeleleyo kwilizwe jikelele ngo-2017
Ukuphumelela kwamazwe aphesheya ngo-2017 yayiyiprojekthi I-sKan. Iqhutywe liqela labafundi bezeMithi kunye ne-Bioengineering kwiYunivesithi yaseMcCaster (Canada). I-sKan, sisixhobo esikrelekrele esinokusindisa ubomi kwihlabathi liphela. Ivumela ukubona imelanoma ebangela umhlaza wolusu, ngendlela elula nefumanekayo. Uyilo lubonisa isisombululo esisebenzayo esikhawulezisa inkqubo yokuqonda isifo. Yakhethwa nguJames Dyson ngokwakhe.
Eco-Friendly Faucet yenye yoyilo thaca kwaye wamanqam. Olu luyilo luyimpompo enciphisa inani lamanzi asetyenziswa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-95, ngaxeshanye nompompo oqhelekileyo. Umyili ulinge into enesidambisi esingenanto kunye necompressor yamanzi. Yile ndlela wakwazi ngayo ukucoca ibhayisekile yakhe nge-100 ml yamanzi.
Ngenxa yokunqaba kwamanzi kwihlabathi liphela, uyilo lokonga amanzi luyimfuneko enkulu. Olu luyilo lwenza ukuba kwenzeke ngokwenziwa kwamanzi. Inkqubo isekwe ekwaphuleni ukugeleza okuqhubekayo kwamanzi abe ngamathontsi amancinci, ehamba ngesantya esiphezulu.
Ukuba uhlangabezana neemfuno, musa ukulinda ukuzazisa ngokwakho kunye neqela lakho kwiqela elitsha kwaye ngubani owaziyo, liphumelele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Amabhaso kaJames Dyson abuyile, iiprojekthi ezintsha ezinomvuzo omkhulu
"Ikati Into" yinkqubo yeemodyuli eziguquguqukayo njengekhaya labasetyhini